Dagaal culus oo maanta Ciidamada Amisom iyo Al Shabaab ku dhex maray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye - iftineducation.com
iftineducation.com – Dagaal culus oo hubka noocyadiisa kala gedisan leesku adeegsaday, ayaa waxay saakay ka dhaceen wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalka waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano Arbacow oo ku dhow deegaanka Ceelasha Biyaha, waxaana halkaasi fariisimo ku leh Xoogaga Midowga Afrika ee Somaliya.
Ciidamada Amisom, ayaa waxay Shabaabka kala kulmeen dagaal dhowr jiho leh, oo ay barbar socdeen madaafiic xoogan, iyadoo Xoogaga Amisom ay kaga jawaabeen hubka waaweyn.
Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ayaa muddo saacad ka badan ka dib waxay gaareen goobihii ay Shabaabku weerarada ka soo qaadeen, iyagoona dib ugu soo celiyay xaaladii caadiga ahayd ee halkaasi ka jirtay.
Shamsa Maxamuud Maxamed oo ka mid dadka deegaanka, ayaa waxay sheegeysaa inay maanta soo xusuusteen dagaaladii furinta ahaa, ee ka socon jiray Magaalada Muqdisho, marka aad eegto sida dagaalku uu u ballaarnaa.
Dagaalkaan oo la rumeysan yahay in khasaaaro dhimasho iyo dhaawacba leh uu ka soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, ayaa waxaa hadana jirin faah faahin badan oo laga haayo.
Saraakiisha Ciidamada Amisom, Dowladda iyo Shabaab, ayaan wax war ah ka soo kala saarin dagaalkaasi.
Nin ay baadi-goobayaan booliska aduunka oo wasiir loo magacaabay